အန်တာရစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 16h 29m 24s, −26° 25′ 55″
အန်တာရစ် (/ænˈtɑːriːz/) ( တနည်း Alpha Scorpii အတိုကောက် α Scorpii သို့မဟုတ် α Sco) သည် ညဘက်ကောင်းကင်တွင် ၁၅ ခုမြောက် အတောက်ပဆုံးနှင့် ကြယ်စုတန်း ဗြိစ္ဆာ နက္ခတ်တာရာတွင် အတောက်ပဆုံး ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ ကြယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်အရ အန်တာရစ်သည် ဆူပါ ဧရာမကြယ်နီဖြစ်ပြီး လေ့လာနိုင်သောကြယ်များထဲတွင် အတောက်ပဆုံးနှင့် အကြီးမားဆုံးကြယ်ဖြစ်သည်။ အန်တာရစ်သည် Scorpius-Centaurus Association ၏ အဖွဲ့ခွဲဖြစ်သော Upper Scorpius ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကာ ယင်းထဲတွင် ပျမ်းမျှ သက်တမ်း ၁၁ မီလီယံနှစ်ရှိကြကုန်သော ကြယ်များပါဝင်ပြီး အကွာအဝေးအားဖြင့် ၁၄၅ parsecs (အလင်းနှစ် ၄၇၀) ကွာဝေးသည်။
ကြယ်စုတန်း Scorpius မှ အန်နာရစ်၏တည်နေရာ
16° 29′ 24.45970″
ဗဟိုခွာအား အလျင် (Rv) −3.4 km/s
သင့်လျော် ရွေ့လျားမှု (μ) RA: −12.11 mas/yr
ပြောင်းလဲ တည်နေရာ (π) 5.89 ± 1.00 mas
အကွာအဝေး approx. ၅၅၀ ly
(approx. ၁၇၀ pc)
ပကတိ အရွယ်အစား (MV) −5.28
ဒြပ်ထု 12.4 M☉
အချင်းဝက် 883 R☉
တောက်ပမှု 57,500 L☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား(log g) 0.1 cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 3400 ± 200 K
လှည့်ပတ်အလျင် (v sin i) 20 km/s
ဒြပ်ထု 7.2 M☉
အချင်းဝက် 5.2 R☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား (log g) 3.9 cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 18,500 K
လှည့်ပတ်အရှိန် (v sin i) 250 km/s
နေနှင့် အတ်တာရစ်အား အရွယ်အစားအားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြထားပုံ
အန်တာရစ်သည် ဆူပါကြယ်ဘီလူးဖြစ်ပြီး ကြယ်အမျိုးအစား M0.5Iab ဖြစ်သည်။ အချင်းဝက်သည် နေထက် အဆပေါင်း ၈၈၃ ရှိသည်။ ယင်းအား မိမိတို့ နေစကြာဝဠာ၏အလယ်တွင် ထားမည်ဆိုပါက ယင်း၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် ဂျူပီတာဂြိုဟ်ပတ်လမ်းအထိ ရောက်ရှိနေပေလိမ့်မည်။ အန်တာရစ်သည် ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ် ၅၅၀ (၁၇၀ parsecs) ကွာဝေးသည်။ ယင်း၏ တောက်ပမှုသည် နေထက် အဆပေါင်း ၁၀၀၀၀ ပိုမိုတောက်ပသည်။ သို့သော် ကြယ်၏ အနီအောက်ရောင်ခြည် တောက်ပမှုအပိုင်းများအား ထည့်တွက်ပါက နေထက် အဆပေါင်း ၆၅၀၀၀ ပိုမိုတောက်ပသည်။ ထုထည်သည် နေထုထည်ပေါင်း ၁၅ မှ ၁၈ ကြားတွင် ရှိမည်ဟု တွက်ချက်ထားသည်။ မကြာသေးခင်က လေ့လာချက်အရ နေထုထည်၏ ၁၇ ဆနှင့် သက်တမ်းအားဖြင့် ၁၂ မီလီယံနှစ် ရှိပြီဟု ယူဆရသည်။
အန်တာရစ်အား နှစ်တိုင်း မေလ ၃၁ ရက်တွင် ကြယ်သည် နေ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ်တွင်ရှိချိန် မြင်တွေ့ရနိုင်သည်။ ယင်းအချိန်တွင် ကြယ်သည် အီကွေတာမှဆိုပါက နေဝင်ချိန်တွင် ပေါ်ထွက်လာပြီး မိုးသောက်ချိန်တွင် ပြန်ဝင်သွားသည်။ အန်တာရစ်အား ညဘက်ကောင်းကင်တွင် မမြင်နိုင်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နေ၏ နီးကပ်သောအရောင်ဖုံးလွှမ်းမှုကြောင့်ပေတည်း။ ယင်းကဲ့သို့ မြင်နိုင်သည့်ကာလသည် တောင်ကမ္ဘာခြမ်းထက် မြောက်ကမ္ဘာခြမ်းတွင် ပိုမိုကြာရှည်သည်။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ HR 6134, database entry, The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. (Preliminary Version), D. Hoffleit and W. H. Warren, Jr., Centre de Données astronomiques de Strasbourg ID . Accessed on line September 07, 2012.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ "Multi-component absorption lines in the HST spectra of α Scorpii B" (October 2007). Astronomy and Astrophysics 474 (1): 229–237. doi:10.1051/0004-6361:20077308. Bibcode: 2007A&A...474..229B.
↑ "Variability in red supergiant stars: pulsations, long secondary periods and convection noise" (2006). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 372 (4): 1721–1734. doi:10.1111/j.1365-2966.2006.10973.x. ISSN 0035-8711. Bibcode: 2006MNRAS.372.1721K.
↑ Evans၊ D. S. (June 20–24, 1966)။ "The Revision of the General Catalogue of Radial Velocities"။ in Batten၊ Alan Henry; Heard၊ John Frederick (eds.)။ Determination of Radial Velocities and their Applications, Proceedings from IAU Symposium no. 30။ Determination of Radial Velocities and their Applications။ 30။ University of Toronto: International Astronomical Union။ p. 57။ Bibcode:1967IAUS...30...57E။
↑ Buick၊ Tony (2010)။ "Classification of the Stars"။ The Rainbow Sky။ Patrick Moore's Practical Astronomy Series။ pp. 43–71။ doi:10.1007/978-1-4419-1053-0_4။ ISBN 978-1-4419-1052-3။ ISSN 1431-9756။
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ Schröder၊ K.-P.; Cuntz၊ M. (April 2007)၊ "A critical test of empirical mass loss formulas applied to individual giants and supergiants"၊ Astronomy and Astrophysics၊ 465 (2): 593–601၊ arXiv:astro-ph/0702172၊ Bibcode:2007A&A...465..593S၊ doi:10.1051/0004-6361:20066633
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ "On the absolute scale of mass-loss in red giants. II. Circumstellar absorption lines in the spectrum of alpha Sco B and mass-loss of alpha Sco A" (1978). Astronomy and Astrophysics 70: 227. Bibcode: 1978A&A....70..227K.
↑ Allen၊ Richard Hinckley (1899)။ Star-names and their meanings။ G. E. Stechert။ pp. 364–367။ 2011-12-31 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ANTARES -- Double or multiple star။ SIMBAD။ Centre de Données astronomiques de Strasbourg။ 2011-12-31 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် Antares နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
အန်တာရစ် on WikiSky: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hydrogen α, X-Ray, Astrophoto, Sky Map, Articles and images
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အန်တာရစ်&oldid=721848" မှ ရယူရန်
၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။